Britain oo kordhinaysa gargaarka Soomaaliya ay siiso - BBC Somali
Britain oo kordhinaysa gargaarka Soomaaliya ay siiso
Xoghayaha Britain u qaabilsan horumarinta caalamiga ah, Andrew Mitchel ayaa ku dhawaaqay in la kordhinyao taageerada UK ay siiso Soomaaliya, oo loo adeegsan doono wax ka qabshada dhinaca amniga, hagaajinta xaaladaha noloshada dadka gudaha dalka.
UK ayaa sadex jibaaraysa taageeradeeda Soomaaliya sadexda sano ee soo socota, si loo abuuro shaqo iyo fursado kale oo rajo lagu siinayo Soomaalida in ay helaan meel ay si nabad ah nolol uga samaysan karaan.
Isagoo ku dhawaaqayay natiijada dib u eegidda barnaamijka horumarinta caalamiga ah gudaha baarlamaanka, ayaa Andrew Mitchell wuxuu yiri:
"waxaan diiradda dadaalkeena saari doonnaa meesha baahida ugu badan ay ka jirto, ma aha oo kaliya lacag meel dhigid ee xitaa waa wax ka badalidda nolosha dhowr million oo qof si ay cunto u helaan, biyo nadiif ah, daryeelka aasaasiga ah iyo waxbarasho. Waxaan u xoojinaynaa dadaalkeena si wax looga qabto saboolnimada tiro dalalal ah oo dagaallo ay ka jiraan iyo dalalka nugul. Waxaan ognahay in uusan jiraynin dal dagaal ka socdo ama ka mid ah dalalka taagta daran in aysan ka soo bixi karin hadafyada horumarinta millinniem-ka iyadoo aan si xoog leh gacan loo siinin."
Barnaamijka gargaarka cusub ee UK ee Soomaaliya ayaa dardargalin doona xasiloonida mudada dheer si wax looga badallo nolsoha dadka Soomaaliyeed, iyadoo:
i) jawaab deg deg ah laga bixinayo baahida biniaadaminimo ee dadka Soomaaliya. Ii) lala shaqaynayo bulshooyinka ku nool goobaha xasiloonidu ka jirto sida Somaliland si loo xoojiyo nanabadda iyo dowladnimada. (iii) abuuritaanka shaqooyinka mudada dheer. (iv) wanaajinta helitaanka daryeel caafimaad oo wanaagsan gaar ahaan dumarka iyo caruurta.
Madaxa xafiiska horumarinta UK ee Kenya iyo Somalia ee magaalada Nairobi, Alistair Fernie ayaa sheegay in uujeedada barnaamijka DFID ee Soomaaliya ay tahay in wax looga qabto saamaynta dagaalada ee dhinaca bini'aadaminimada, la xoojiyo goobaha xasiloon lana dardargaliyo sharcinimada dowladda si loo dhiso nabad waarta. Gargaarika aan kordhiyo waxaa uu dhalin doonaa natiijo dadka soomaaliyeed ay helaan inkastoo xaalad adag oo dagaallo ah lagu jiro.
Gargaarka UK ee Soomaaliya ayaa ilaa shan boqol oo kun oo Soomaali ah sanadkii gaarsiinayo caawinaad bini'aadaminimo. Waxaa loo adeegsan doonaa in wax looga qabto nafaqo darada ba;an, kordhinta tallaalka caruurta iyo bixinta biyo iyo daryeelka caafimaad ee aasaasiga ah ee bulshadu u baahan tahay.
Barnaamijka K ayaa gacan ka gaysan doona abuuritaanka ilaa 45 kun oo shaqo. Waxaa kaloo uu hagaajin doonaan goobaha caafimaada, tababar siinta dhaqaatiir dheeraad ah dalka oo dhan si Soomaalida ay u helaan daryeel caafimaad oo wanaagsan, waxna looga qabto dhimashada laga hortagi karo gaar ahaan tan dumarka iyo caruurta.
War saxaafadeedka ayaa sheegay in si taas loogu guulaysto, dowladda UK ay sii wadi doonto in la shaqayso hay'ado la aamini karo oo ay ku jiraan kuwa Un-ka iyo kuwo aan dowli ahayn, oo awood u leh in ay ka shaqeeyaan inta badan gudaha dalka Soomaaliya, howshoodana la marsiin doono la socosho xoog leh.
Alistair Fernie ayaa intaas ku daray in "horumarka iyo xasiloonidada Soomaaliya ay sidoo kale muhiim u tahay amaanka gobolka oo dhan iyo Uk-ba. Natiijada ay ka rajaynayaan Soomaaliya ayuu sheegay in aysan ahayn oo kaliya in dadka Britain ay qarash bixinayaa, balse iyaga laftooda dan baa ugu jirta." Ferne.
Gargaarka UK ee la siiyo Soomaaliya si loogu caawiyo nabadda iyo xasiloonda Soomaaliya wuxuu horay u ahaa ilaa 26 million oo gini sanadkii 2010/2011, iyadoo sadexda sano ee soo socota uu noqonayo ilaa 80 million oo giniga istarliinka ah muddada sadexda sano ah ee soo socota.
Ujeedada barnaamijka DFID ee Soomaaliya waa in lagula tacaallo saamaynta dagaalada ee xaaladda bini'aadaminimo.
Alistair Fernie, Madaxa xafiiska DFID ee Kenya iyo Somalia ee Nairobi.
Xoghayaha horumarinta caalamiga ah ee UK, oo dhowaan booqday Hargeisa wuxuu sharaxaad ka bixiyay in gargaarka UK ee Soomaaliya boqolkiiba 40 ay heli doonto Somaliland.
War saxaafadeedka ayaa xusay in Somaliland ay muujisay demoqraadiyad iyo suurtagalnimada dowlad xasiloon, iyadoo guud ahaan Soomaaliya ay xaalad adag ka jirto.